Faah faahin:- Qarax aad u xoogan oo saakay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qasaare ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax aad u xoogan oo saakay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qasaare ka dhashay
Waxaa faah faahin dheeraad ah kasoo baxaysaa qarax aad u xoogan oo saakay aroortii ka dhacay goob maqaayad ah oo ku taala suuqa Xirka-dheere oo ku yaala degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi oo la sheegay inuu ahaa miino dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay maqaayad ku dhex taala suuqa Xirka-Dheere ee degmada Kaaraan, waxaana sida la sheegay uu bar-tilmaameedka ahaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku geeriyootay 2 qof oo dumar ah, kuwaas oo ku dhex sugnaa maqaayadda qaraxa lala eegtay.
Goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa islamarkiiba soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa nabad-sugidda qaranka, kuwaas oo halkaasi baaritaano ka bilaabay.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan loo soo qabtay qaraxaas, waxaana haatan goobta uu qaraxa ka dhacay ka socdo howlgalo aad u balaaran.
Mas’uuliyadda qaraxaasi ayaa durbadiiba waxaa sheegtay Xarakada Al-shabaab, waxayna sheegeen inay ku dileen ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo maqaayadda ku dhex sugnaa.
Dhinaca kale, dad goob-joogayaal ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku geeriyootay 2 haween oo gudaha maqaayadda ku jiray.